PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: " မန္တလေးဝိညာဉ် ပျောက်ဆုံးခြင်း"
မန္တလေးမြို့တော် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လယ်ယာမြေများကို မည်သည့်ဝင်ငွေဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှန်း မသိသည့်အပြင် နိုင်ငံသားကတ် ကိုင်ဆောင်ထားသော်လည်း မြန်မာစကား မပြောတတ်သူများက မန္တလေး ဒေသခံအချို့ နာမည်ခံကာ မည်သူမျှ မျှော်လင့်မထားသည့် ဈေးအမြောက်အမြားဖြင့် အလုံးအရင်း ဝယ်ယူလျက်ရှိသည်။ တည်ဆဲဥပဒေ များအရ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မြေယာများကို မည်သည့် နိုင်ငံခြားသားမျှ တိုက်ရိုက် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိသော်လည်း နိုင်ငံသားနာမည်ခံ ဝယ်ယူနေခြင်းကိုမူ တားဆီးနိုင်သော ဥပဒေ တိတိပပ မရှိပေ။
ကြားခံဝယ်ယူပေးသူ နိုင်ငံသားအချို့ ပင်လျှင် နိုင်ငံသားကတ် ကိုင်ဆောင်ထားသောကြောင့် နိုင်ငံသားဟု ဆိုနိုင်သော်ငြား မြန်မာစကားကိုပင် ရေလည်စွာ မပြောနိုင်သူများ ဖြစ်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရကြောင်း မန္တလေးဒေသခံ များထံမှ သိရသည်။
စင်စစ်အားဖြင့် မန္တလေးမြို့တော်သည် မြန်မာတို့၏ နောက်ဆုံးမင်းဆက်နှင့် နောက်ဆုံးဘုရင် နန်းစိုက်ခဲ့ရာ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်းအမွေအနှစ်များ ကြွင်းကျန်ရစ်ရာ၊ မြန်မာမှု၊ မြန်မာဟန်၊ မြန်မာ့ရိုးရာအနုပညာ၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ ရိုးရာပွဲလမ်းသဘင် အခမ်းအနားများ ထိန်းသိမ်းထားရာ ဘာသာ၊ သာသနာ ထွန်းပြောင်ခဲ့သော အတိတ်ကာလ၏ သက်သေများရှိရာ၊ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများသို့ သံတမန် အဆက်အသွယ် အများဆုံး ထူထောင်နိုင် ခဲ့သည့်အပြင် ဥာဏ်ပညာအမြော်အမြင် ကြီးမားသည့် သာသနာပြုမင်းတစ်ပါး အဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သူ မန္တလေးမြို့တည် မင်းတုန်းမင်း နန်းစိုက်ခဲ့ရာ စသဖြင့် ဂုဏ်အင်္ဂါများစွာဖြင့် လေးစားမြတ်နိုး ထိန်းသိမ်းအပ်သော မြန်မာ့ရတနာ တစ်ပါးသဖွယ် ဖြစ်နေသည့် မြို့တော်လည်းဖြစ်သည်။
သို့သော် ယနေ့မန္တလေးသည် ကုန်ခဲ့သည့် ၂၅ နှစ်ခန့်က မန္တလေးနှင့် လုံးဝမတူ ခြားနားသည့် မန္တလေးဖြစ်နေကြောင်း ဒေသခံများ၊ မန္တလေးနှင့် ပုံမှန် ဆက်သွယ်နေသူများအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား အများစုက တညီတညွတ်တည်း မှတ်ချက်ပြုကြသည်။ ထိုသို့ မှတ်ချက်ပြု ရလောက်အောင်ပင် အချက်အချာကျသည့် မြို့တော်နေရာအများစုကို မြန်မာစကား မပြောတတ်သော်လည်း နိုင်ငံသား ဖြစ်နေသူများက နေရာယူထားကြသည်။
ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၂ခုနှစ်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခအပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်တံခါး လုံခြုံရေးကိစ္စကို ရှေ့တန်းတင် ပြောဆိုလာခဲ့ ကြသည်မှာ ယနေ့အချိန်အထိ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အရှေ့ဘက်တံခါး ဟင်းလင်းပွင့်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံး မြို့တော်၊ ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ကြီး တစ်ခုလုံး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား နားမလည်၊ မလေးစားသူများ တစ်စတစ်စ နေရာယူ ကြီးစိုးလာခြင်းကိုမူ အနောက်ဘက်တံခါး ပြဿနာကြောင့် မေ့လျော့ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေခဲ့သည်။
စင်စစ်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ နယ်စပ်နှင့် ပုံမှန်လမ်းကြောင်းမှ ကုန်းကြောင်း၊ လေကြောင်းဖြင့် အလုံးအရင်း ဝင်ရောက်နေသော နိုင်ငံခြားသား အားလုံး သတ်မှန်ချိန် စေ့သောအခါ မည်မျှ ပြန်ထွက်သွားသည်၊ မည်မျှ ကျန်နေခဲ့သည် ဆိုသောကိစ္စမှာ များစွာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည့်အပြင် မေးခွန်းထုတ်စရာလည်း ကောင်းလှသည်။
"ရှေးတုန်းက မန္တလေး ဟာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့ ဗဟိုချက်မ၊ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အနုပညာမှန်သမျှရဲ့ ပင်မရေးစီးအဖြစ် တည်ရှိနေခဲ့ပြီး မြန်မာစကားနဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီး (The last bastion of Myanmar language and culture) အဖြစ်တည်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မန်းလေးသားမှန်သမျှ ဒီအချက်တွေကို ဂုဏ်ယူခဲ့ကြတာပါ။ ၀င့်ကြွားခဲ့ကြတာပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း မန်းလေးသားတွေကို ဒေသစွဲသိပ်ကြီးတာလို့ ပြောကြတာပေါ့. . .
အမေမြိုင်ရဲ့ မန္တလေး၊ လေဘာတီရဲ့ မန္တလေး၊ လှကလေးစိန် နဲ့ ရွှေမန်း ရီရီ တို့ရဲ့ မန္တလေး ၊ သဘင်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ မန္တလေးမှာ တန်ဆောင်တိုင် ကထိန်ရာသီညမှာ အငြိမ့်ပွဲ၊ ဇတ်ပွဲ၊ ရုပ်သေးပွဲ တစ်ပွဲမှာ ရှာမတွေ့ရတော့ဘူး။ ခြံဝန်းအကျယ်ကြီးနဲ့ အုတ်ခံပျဉ်ထောင်အိမ်တွေကြားမှာ တိုက်အမြင့်ကြီးတွေ အစားထိုးသွာပြီ၊ မုန့်တီဆိုင်၊ မြီးရှည်ဆိုင်တွေကြားမှာ မာလာဟင်း၊ အကင်ဆိုင်တွေနေရာယူသွားပြီ၊ ရွှေခြေကျင်းနဲ့ နန်းဆန်တဲ့ ကျွန်တော် ကျွန်တော်နဲ့ ချစ်စဖွယ်ပြောတက်တဲ့ မန်းပျိုဖြူတွေနေရာမှာ ဘောင်းဘီတို၊ စကတ်အတိုနဲ့ အသားနီစပ်စပ် အမျိုးသမီးလေးတွေ နေရာယူသွားပြီ၊ ဘိုကေကို ကြကြနန ဖီးပြီး ယောပုဆိုးနဲ့ စတိုင်ထုတ်တက်တဲ့ မန်လေးသားတွေကြားမှာ ဆံပင်နီကြောင်ကြားနဲ့ စကားမပီတဲ့ အပြောအဆို ရိုင်းတဲ့ ကောင်းလေးတွေ နေရာယူသွားပြီး မန္တလေးကို မန်းလေးသားတွေမပိုင်တော့ဘူး ကျုပ်တို့မြန်မာတွေမပိုင်တော့ဘူး မန္တလေး ရဲ့ ၀ိညာဉ်ပျောက်ဆုံးသွားပါပြီ . . ."
မှီငြမ်း။ ။ The voice အယ်ဒီတာ့အာဘော် နှင့် ဆရာလူထုစိတ်ဝင်း ၏ မန္တလေးဝိညာဉ် ဆောင်းပါး